Ikati lilele eziko – Buza Noma Yini
Ikati lilele eziko
Solved1.83K views July 6, 2021 ulimi LwesiZulu
Anonymous	 June 17, 2021 0 Comments
Anonymous	 Posted June 17, 2021	 0 Comments
IKATI – Isilwane esinemlenze emine esingadle ngabude nabukhulu esiphuphuzela uboya. Sinobungani leslwane asinalo udlame kodwa mangabe sichukuluzwa siyingozi ngezinzipho futhi siwusizo mangabe uxakwe amagundane endlini.
IZIKO – Lena indawo lapho kubaselwa khona umlilo ilapho kuphekelwa khona.
Qhaphela: Akusho ukuthi la kunomlilo khona iseZiko kepha lapho kuphekelwa khona ilapho okuyiZiko. Iziko liyaba iziko umlilo ungekho ngoba kusuke kuseyindawo yokuphekela.
Ikati lilele eziko – lokhu kuchaza ukuthi umlilo awukho ngoba lingasha ikati makukhona umlilo eziko. Ukungabi khona komlilo lokhu kuchaza ukuthi amabhodwe awabekiwe okusobala akuphekiwe ukudla akukho kuhlushekiwe.
Lesisaga sichaza ukuthi abantu bayahlupheka akuphekwa kulowo muzi indlala ixakile.
Kususelwa esenzweni sekati lona elilala lapho okubaswa kuphekelwe khona(eziko). Alilali khona makushisa kodwa makungabasiwe lilala khona liziphumulele. Kungaba phezu komlotha obandayo noma kushayeliwe kuyisiyingi nje kuphela.
Anonymous Answered question June 17, 2021
Akukho kudla lapha ekhaya. Ibhokile inkemane